Cudurka Dabeysha Oo Soomaaliya Laga Waayay – Qaranimo Online
You are here: Home 2015 October 23 Cudurka Dabeysha Oo Soomaaliya Laga Waayay
Cudurka Dabeysha Oo Soomaaliya Laga Waayay
Posted on October 23, 2015 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, 23 October 2015 – Hey’adaha Qaramada midoobay ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa ay ku dhawaaqeen in sanadihii 2013-2014 Soomaaliya laga heley cudurka Dabeesha kaas oo saameeyay dad ku dhow 200 oo ruux oo u badan carruur uu ka dhaaday cudurkaasi Soomaaliya.
Sida lagu sheegay waxbixin ay si wadajir ah u soo saareen hey’adahaUNICEF, WHO iyo hey’adda caalamiga ah ee ka shaqeeya ciribtirka cudurka Dabeesha,iyadoo tani ay ka dambeysay 14 bilood kadib markii kiis cudurkaasi kamid ah laga heley dalka.
Qiimeyn laga sameeyay guud ahaan Soomaaliya ayaa bishan Oktoober waxaa la go’aamiyay in Soomaaliya laga waayay cudurkaasi.
Isku dubaridka gargaarka ee Soomaaliya Peter de Clercq ayaa sheegay in guulaha arintan laga gaaray ay sharafteeda leeyihiin mutadawaciinta Soomaalida ah kuwaas oo naftooda khatar u geliyay sidii ay u badbaadin lahaayeen nolashada dad oo Soomaaliyeed.
Isagoo dowladda Soomaaliyana ku amaanay la dagaalanka cudurkan si wadanka looga ciribtiro.
“Madaxda Soomaalida waxaa ay cudurka Dabeesha ka dhigeen mudnaanta koowaad ee qaranka ayagoo sameeyay dadaal xoog badan si carruurta oo dhan tallaalka u qaataan,” ayuu yiri .
Cudurka Dabeesha ayaa laga heley Soomaaliya sanadkii 2013 bishii Maay, taas oo aheyd markii ugu horeysay muddo lix sano ah, kadib markii waalidiinta gabar labo sano jir ah oo Muqdisho jooga la arkay ayadoo aan socon Karin.
Cudur sidaha loo yaqaano virus, ayaa ah mid sababi kara curyaanimo ama paralysis xitaa dhimasho, waana mid si dhaqso leh ku fidi karaa, waxaana uu saameeyay 194 ruux sanadkii 2013-ka.
Iyadoo Soomaaliya dadka uu cudurkan uu saameeyay ay gaarayaan ilaa 5 ruux sanadkii 2014ka.
In ka badan 2.1 million oo carruur ah oo da’dooda ay ka hooseyso shan jirka ayaa bartilmaameed u ahaa olole tallaal ah oo ay fulisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayadoo kaashanaysa hey’adaha qaramada midoobay iyo ururka GPEI.
Labo kamid ah shaqaalaga hey’adda UNICEF oo ka shaqeynayay la dagaalanka cudurka Dabeesha ayaa ku dhintay qarax ka dhacay Garoowe bishii April.
Faarax C/qaadir iyo Gabre oo si qarsoodi ah loo duubay iyaga oo tashanaya February 26, 2016
Madaxweyne Erdogan oo maanta booqanaya Iraan October 4, 2017
Madaxweynaha dalka oo u Amba baxay New York September 26, 2015
Dhageyso: Dumarka Musharax Madaxweyne oo 50% laga qaadayo lacagta doorashada! January 26, 2017
Everyone wants to see a stable and prosperous Somalia September 28, 2016
Mareykanka oo Sheegay in Malaayiin Dollar ay ku bixinayaan ciribtirka Al-shabaab. March 12, 2018
R/kuxigeenka Soomaaliya Oo Ka Qayb Galay Shir Ka Dhacay Maraykanka. March 5, 2016
Meydka Madoobe Nuunoow Oo laga Dejiyay Baydhaba October 29, 2017
Xuquuqda carruurta oo laga hadlay April 26, 2016
Kenya unveils new security measures ahead of polls August 6, 2017
16 guests, 11 bots, 0 members
Madxweynane Farmaajo Oo Gaaray Magalada Baydhab Ee G/Baay April 23, 2017
Age increased to 22 for “dependent child”: Immigration Canada May 5, 2017
Kheyre Oo Ku Wajahan Imaaraadka Carabta February 25, 2018
Ahlu Sunna-da Galgaduud oo ku gacan seeyrtay:- DF Soomaaliya,Gal-Mudug iyo Itoobiya November 20, 2015
Muwaadinii Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Marykanka July 20, 2017